Hyoscine (ဟိုက်အိုဆင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Hyoscine (ဟိုက်အိုဆင်း)
Hyoscine (ဟိုက်အိုဆင်း) ကဘာလဲ။
သောက်သုံးမှု နှင့် သိမ်းဆည်းနည်း
Generic Name: Hyoscine (ဟိုက်အိုဆင်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
hyoscine ကို မည်သည့်အကြောင်းအရာများအတွက် အသုံးပြုကြပါသလဲ။
Hyoscine သည် anticholinergic အမျိုးအစား ဆေးတမျိုးဖြစ်သည်။ hyoscine သည် ခန္တာကိုယ်တွင် အရည်များစစ်ထုတ်ခြင်းကို နည်းစေခြင်း၊ အစာအိမ် နှင့် အူလှုပ်ရှားမှုကို နှေးစေ/နည်းစေခြင်း၊ သူငယ်အိမ်ကို ကျယ်စေခြင်း အစရှိသည့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ဖြစ်စေပါသည်။
ထို့ကြောင့် hyoscine ကို ကားမူး/လှိုင်းမူးသောကြောင့် ပျို့အန်ခေါင်းမူးမအီမသာဖြစ်ခြင်း၊ မေ့ဆေးနှင့် ခွဲစိတ်မှုမှ ပြန်လည်သတိရလာချိန်တွင် ပျို့အန်ခြင်း စသည်တို့ကို ကုသရာတွင် သုံးပါသည်။ hyoscine ကို ပါကင်ဆန်ရောဂါကုသခြင်း၊ ကြွက်သားမာတောင့်နေခြင်းများကို ကုသခြင်း၊ irritable bowel syndrome နှင့် diverticulitis ဟုခေါ်သော အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများ ကို ကုသခြင်း နှင့် အခြားသော အခြေအနေများ အတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော အချက်များအပြင် အခြားသော ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့်လည်း hyoscine ကို သုံးနိုင်ပါသည်။
Hyoscine ကို ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်ပါသလဲ။
hyoscine ကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသည့် အတိုင်း အတိအကျသုံးစွဲပါ။ မရှင်းလင်းသည်များရှိပါက ဆရာဝန်၊သူနာပြု သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကို မေးမြန်းပါ။ ဆေးသောက်လျှင် ရေတဖန်ခွက် အပြည့်ဖြင့် သောက်ပါ။hyoscine ကို စွတ်စိုထိုင်းမှိုင်းသော သို့မဟုတ် အပူရှိန်ပြင်းသော နေရာများတွင် မသိမ်းဆည်းရပါ။ အခန်းအပူချိန်တွင် သိုလှောင်ရပါမည်။
Hyoscine ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ hyoscine ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ hyoscine ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Hyoscine ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Hyoscine ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Hyoscine ကိုမသောက်သုံးခင်မှာ ဘယ်အချက်အလက်တွေကို သိထားသင့်သလဲ။
hyoscine ကပ်ခွာများကို အသုံးမပြုမီ အောက်ပါအချက်များရှိလျှင် ဆရာဝန်ကို ကြိုတင်ပြောပါ။
• hyoscine သို့မဟုတ် အခြားဆေးများနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းများရှိလျှင်။
• သင်လက်ရှိ သုံးစွဲနေသော ဆေးများ သို့မဟုတ် သုံးစွဲရန် အစီအစဉ်ရှိသည့် ဆေးများ (ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်ဆေး၊ မိမိဖာသာ သောက်သည့်ဆေး၊ ဗီတာမင်အားဆေး၊ သဘာဝအားဖြည့်ပစ္စည်းများ အားလုံးပါဝင်သည်)ကို သင့်ဆရာဝန်အား သေချာစွာ ပြောပြပါ။ အောက်ပါ ဆေးများကို သုံးစွဲနေပါက ဆရာဝန်ကို မမေ့မလျော့ ပြောပြပါ။ အထူးသဖြင့် လေးလံထိုင်းမှိုင်းစေသော ဆေးများ (ဥပမာ ။ ။ အအေးမိနှာစေးချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးများ၊ဗီတာမင်ဆေးများ)။
• သင့်တွင် ရေတိမ်၊ နှလုံးရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ အသည်းရောဂါ၊ အစာအိမ် သို့မဟုတ် အူပိတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆီးသွားရခက်ခဲခြင်းများရှိလျှင်။
• ကိုယ်ဝန်ရှိနေလျှင် (အထူးသဖြင့် လ အတော်ရင့်နေလျှင်)၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန် အစီအစဉ်ရှိလျှင် သို့မဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေလျှင်၊ဆေးသောက်နေရင်း ကိုယ်ဝန်ရှိလာလျှင်။
• သွားနှုတ်ခြင်းအပါအဝင် အခြားသော ခွဲစိတ်ကုသမှုများ ခံယူရန်ရှိပါက hyoscine ကပ်ခွာများကို သုံးလျက်ရှိကြောင်း ဆရာဝန်ကို ကြိုပြောပါ။
• hyoscine သည် ငိုက်မျဉ်းစေသဖြင့် ဆေး၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို သေချာစွာ မသိရှိသေးလျှင် ကားမောင်းခြင်း သို့မဟုတ် စက်ကိရိယာအကြီးစားများ မောင်းနှင် ကိုင်တွယ်ခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။ အထူးသဖြင့် ဆေးစတင် သုံးစွဲသော လေးငါးရန်ခန့် နှင့် ဆေးပမာဏကို တိုးပြီးခါစတို့တွင် ဖြစ်ပါသည်။
• အရက်သည် hyoscine ကြောင့်ဖြစ်သော ငိုက်မျဉ်းမှု ကို ပိုဆိုးစေသဖြင့် အရက်သေစာသောက်စားခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး သင့်ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးပါ။
Hyoscine က ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိနိုင်လဲ။
အောက်ပါလက္ခဏာများ ခံစားရပါက hyoscine သောက်သုံးခြင်းကို ချက်ချင်းရပ်ပြီး ဆရာဝန်နှင့် အမြန်ပြသပါ။
အင်ပြင်များထွက်ခြင်း၊အသက်ရှုရ ခက်ခဲလာခြင်း၊မျက်နှာ၊နှုတ်ခမ်း၊လျှာ သို့မဟုတ် လည်ချောင်းတို့ ရောင်ရမ်းခြင်း အစရှိသော ဓါတ်မတည့်သည့် လက္ခဏာများ။
ထင်ယောင်းထင်မှားဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် မူမမှန်သော အမူအကျင့်များပေါ်လာခြင်း (အထူးသဖြင့် ကလေးများတွင်)
သို့သော် အောက်ဖော်ပြပါ သာမန်ဘေးထွက် လက္ခဏာများသာ အဖြစ်များပါသည်။ ၎င်းတို့ကို ခံစားရလျှင် ဆေးသောက်ရပ်စရာမလိုသော်လည်း ဆရာဝန်ကို အသိပေးပါ။
ပူလောင်နေခြင်း၊ စူးခနဲ ခံစားရခြင်း။
ယခုဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ခံစားရမှုမှာ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ အထက်ဖော်ပြပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင် မပါဝင်သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါက သင်၏ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ပါ။
ဘယ်ဆေးဝါးတွေက hyoscine နဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်သလဲ။
Hyoscine ဟာ သင်အခုလောလောဆယ် သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေ အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ အထူးသဖြင့်
အောက်ဖော်ပြပါဆေးများကို ယေဘုယျအားဖြင့် Hyoscine နဲ့ တွဲဖက်အသုံးပြုလေ့မရှိပါဘူး။ သို့သော် အချို့သော အခြေအနေများတွင်မူ သုံးစွဲကောင်းသုံးစွဲပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ဆေးနှစ်မျိုးလုံးကို သောက်သုံးရန် လိုအပ်ပါက သင့်ဆရာဝန်အနေဖြင့် ဆေးတမျိုး သို့မဟုတ် နှစ်မျိုးလုံး၏ ပမာဏကို ပြန်လည်ချိန်ဆခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးသောက်ရမည့် အကြိမ်ရေကို ပြောင်းလဲခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။
• Acrivastine ၊ Bupropion၊ Morphine၊ Morphine Sulfate Liposome, Oxymorphone၊ Umeclidinium
အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာတွေက hyoscine နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ပါသလား။
Hyoscine က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်လိုကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေက hyoscine နဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိမလဲ။
Hyoscine ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။ အထူးသဖြင့်
• ရေတိမ် (ထောင့်ကျဉ်း၊ထောင့်ကျယ် နှစ်မျိုးလုံး)—–> အဆိုပါလူနာများတွင် အသုံးမပြုသင့်ပါ။
• အစာအိမ် သို့မဟုတ် အူပိတ်ခြင်း။
• ဆီးသွားရာတွင် ပြဿနာများရှိခြင်း (ဥပမာ။ ။ ဆီးလမ်းကြောင်းပိတ်ခြင်း၊ ဆီးသွားရခက်ခြင်း) —–> အခြေအနေကို ပိုဆိုးစေနိုင်သဖြင့် သတိနှင့် အသုံးပြုပါ။
• ကျောက်ကပ်ရောဂါ —-> သတိဖြင့်အသုံးပြုပါ။ ခန္တာကိုယ်ထဲမှ ဆေးစွန့်ပစ်မှုကို နှေးစေသဖြင့် ဆေး၏အာနိသင်မှာ ခန့်မှန်းထားသည်ထက် များလာနိုင်သည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာ hyoscine ကို သောက်သုံးရမယ့်အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
• ပျို့အန်မအီမသာဖြစ်ခြင်းအတွက် :
သာမန် အအန်ပျောက်စေရန် : ဝ.၃ – ဝ.၆၅ မီလီဂရမ်ကို အကြောသွင်းဆေး၊အသားထိုးဆေး သို့မဟုတ် အရေပြားအောက်ထိုးဆေးများအဖြစ် ၆နာရီခြား သို့မဟုတ် ၈နာရီခြားတကြိမ် လိုအပ်သလိုပေးရမည်။
ခွဲစိတ်ပြီးနောက် ပျို့အန်ခြင်းများအတွက် : မခွဲစိတ်မီ ညနေပိုင်းတွင် hyoscine ၁.၅ မီလီဂရမ် ကပ်ခွာပြားကို နားနောက်တွင် ကပ်ပါ။ ထိုကပ်ခွာကို ခွဲစိတ်ပြီး ၂၄နာရီအကြာထိ ကပ်ထားပါ။
မှတ်ချက် ။ ။ ကလေးခွဲမွေးမည့် လူနာအတွက်မူ hyoscine နှင့် ကလေးထိတွေ့မှု အနည်းဆုံးဖြစ်စေရန် မခွဲမီ တနာရီအလိုမှ ကပ်ပါ။
• ကားမူးခြင်းအတွက် :
ခရီးမထွက်မီ ၄နာရီအလိုတွင် ၁.၅ မီလီဂရမ် ကပ်ခွာပြားကို နားနောက်တွင် ကပ်ပါ။ လိုအပ်သလို ၃ရက်တခါခန့် ကပ်နိုင်သည်။
• ပါကင်ဆန်ရောဂါကြောင့် ခြေလက်အကြောဆွဲခြင်းအတွက်
ဝ.၄ – ဝ.၈ မီလီဂရမ်ကို ၈နာရီခြားတခါ လိုအပ်သလို ပေးရပါမည်။
ကလေးငယ်တွေမှာ hyoscine ကို သောက်သုံးရမယ့်အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
• ပျို့အန်ခြင်းအတွက် :
၁နှစ် မှ ၁၂နှစ်အထိ :6mcg/kg/dose (တခါပေးလျှင် အများဆုံး ဝ.၃ မီလီဂရမ်)ကို အကြောသွင်းဆေး/အသားထိုးဆေး/အရေပြားအောက်ထိုးဆေးအဖြစ် ၆နာရီခြား သို့မဟုတ် ၈နာရီခြားတခါ ပေးနိုင်သည်။
အသက် ၁၂နှစ် အထက် : ခရီးမထွက်မီ ၄နာရီအလိုတွင် ၁.၅ မီလီဂရမ် ကပ်ခွာပြားကို နားနောက်တွင် ကပ်ပါ။ လိုအပ်သလို ၃ရက်တခါခန့် ကပ်နိုင်သည်။
hyoscine ကို ဘယ်လိုပုံစံမျိုး အချိုးအစားမျိုးတွေနဲ့ရရှိနိုင်မလဲ။
hyoscine ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
• အရေပြားပေါ်တွင် ကပ်ရသော ကပ်ခွာ : ၁.၅ မီလီဂရမ်။
• ထိုးဆေး : 0.4 mg/ml (1ml)။
• သောက်ဆေး : ၁၀ မီလီဂရမ်။
အရေးပေါ်အခြေအနေသို့မဟုတ် ဆေးပမာဏ လွန်သွားတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ အရေးပေါ်ဆေးရုံဆေးခန်းများသို့ သွားရောက်ကုသမှုခံယူပါ။
Hyoscine ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။